१५ वर्षीया बालिका बला त्कार आ रोपीलाई अ भद्र व्यवहारको मुद्दा ! « Bagmati Online
१५ वर्षीया बालिका बला त्कार आ रोपीलाई अ भद्र व्यवहारको मुद्दा !
काठमाडौं । बलात्कारको आरोपमा लतिलपुर प्रहरीले वाग्मती गाउँपालिका–७, गिम्दीका एक पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीमाथि १५ वर्षीया बालिका जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ । पीडित किशोरी पनि दुई महिनाको गर्भवती भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट खुलेको छ । तर पीडित बालिकाले किटानी जाहेरी नदिएका कारण बलात्कार आरोपीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।
पीडित किशोरीले उजुरी दिन नमानेपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको चापागाउँका डीएसपी टीका कार्कीले बताए । पीडक पनि पीडित बालिकाको नातेदार नै भएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा ५ दिन म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
बाल क्लबबाट बाहिर आएको घटना
विद्यालयको गिम्दी बाल क्लब सञ्जालका एक सदस्यका अनुसार पीडित बालिकाले केही दिनदेखि अस्वभाविक गतिविधि देखाइरहेकी थिइन् । साथीहरुले सोध्दा उनले ‘भिनाजुले दिदी नभएको वेला जबरजस्ती करणी गरेको’ र दुई महिनादेखि महिनावारी नभएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । बाल क्लबमा आवद्ध उनका साथीहरुले बाल हेल्पलाइन १०९८ मा उजुरी गरे । जनप्रतिनिधि र प्रहरी वृत्त, चापागाउँसम्म खबर पुगेपछि प्रहरीले पीडित र पीडक दुवैलाई कार्यालयमा ल्याएर छलफल गरेको छ ।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख किरण बज्राचार्यका अनुसार स्वास्थ्य जाँचबाट पीडित बालिका गर्भवती भएको पुष्टि भएको छ । तर पीडितले कहणीको किटानी जाहेरी नदिँदा आरोपितमाथि मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बज्राचार्य भन्छिन्, ‘बलात्कारको घटनामा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । पीडितले उजुरी नदिएसम्म कारबाही अघि बढाउन समस्या छ ।’ यदि उजुरी आए करणी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्ने उनले बताइन् ।
किन होस्टायल भइन् बालिका ?
प्रहरी अधिकृतहरु पीडित बालिकालाई धम्की वा कुनै प्रलोभन दिएर होस्टायल गराइएको हुनसक्ने बताउँछन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सिविन नेपालका अधिकारीहरुको पनि उस्तै आशंका छ । संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारी भन्छन्, ‘हेल्पलाइनमा पहिले जबरजस्ती करणी भएको भनेर उजुरी आएको थियो । अहिले जाहेरी नपरेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
ललितपुरकी एसएसपी बज्राचार्य पनि बालअधिकार परिषद्सहित बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरेर घटनाबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल भइरहेको बताउँछिन् । प्रहरीका अनुसार पीडितका बुबाआमा भारतमा छन् । उनी आफन्तको घरमा बसेर पढ्दै आएकी थिइन् ।